विश्वभर १० करोड ६ लाख सं’क्रमण मुक्त, २७ लाख ४५ हजारको मृ’त्यु – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. विश्वभर १० करोड ६ लाख सं’क्रमण मुक्त, २७ लाख ४५ हजारको मृ’त्यु – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
विश्वभर १० करोड ६ लाख सं’क्रमण मुक्त, २७ लाख ४५ हजारको मृ’त्यु
विश्वभरमा १० करोड ६ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन् । बुधबार बिहानसम्ममा १० करोड ६ लाख ९५ हजार एक सय ३३ जना सं’क्रमित कोरोनामुक्त भएका हुन् ।
हालसम्म विश्वमा १२ करोड ४७ लाख ७६ हजार एक सय ५१ जनामा कोरोना सं’क्रमण भएको छ । संक्रमितमध्ये २७ लाख ४५ हजार एक सय ५२ जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ । हाल विश्वमा दुई करोड १३ लाख ३५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् ।
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म तीन करोड ६ लाख ३३ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमितमध्ये दुई करोड २९ लाख २४ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् भने पाँच लाख ५६ हजार सात सय ९९ जना संक्रमितले ज्या’न गु’माइसकेका छन् ।
भारतमा हालसम्म एक करोड १७ लाख ३३ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् । संक्रमितमध्ये एक करोड १२ लाख तीन हजारभन्दा बढी निको भएका छन् भने कोरोनाबाट ज्या’न गु’माउनेको संख्या एक लाख ६० हजार चार सय ७७ जना पुगेको छ।
नेपालमा हालसम्म दुई लाख ७६ हजार दुई सय ४४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये दुई लाख ७२ हजार ९७ जना निको भएका छन् । यहाँ कोरोनाबाट तीन हजार १९ जनाले ज्या’न गुमाइसकेका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 24, 2021 March 24, 2021 66 Viewed